Olee otú ịrụ nkebi mgbake iji weghachi faịlụ site na a na-ehichapụ / furu efu / mebiri emebi nkebi?
Gịnị bụ a nkebi?
A na diski ike na-ekewa otu ma ọ bụ karịa ezi uche n'ìgwè n'ìgwè maka mma akụ management na ịnọgide na-data ekesa na ọnọdụ dị iche iche dị ka kwa onye ọrụ chọrọ. Ndị a ezi uche nkewa na-mara dị partitions na-enye nro nke ụfọdụ onwe ike disks arụ ọrụ kwekọrọ n'uche. A, ndị a na-aha ya s "C", "D", "E" na "F" draịva. The C mbanye na-emekarị e dere ihe na sistemụ arụmọrụ na ya kwekọrọ ekwekọ faịlụ na data. Drive F kwekọrọ na CD / DVD ROM. Partitions D na E nwere ike ma ọ enwe ugbu na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ.
Nsogbu na kọmputa partitions
E nwere a dum ndepụta nke ihe ndị na-nwere ike ịga na-ezighị ezi na a na kọmputa na diski ike nkebi ma accidently ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mbipụta na-depụtara n'okpuru:
Ehichapụ nkebi: partitions ịdị na-ehichapụ onwe ha ma ọ bụrụ na ihe na-kpọrọ ihe nke ukwuu na-ezighị ezi na diski ike. Ukwuu n'ime ndị partitions na-ehichapụ accidently.
Ị nkebi: Dị ka nhichapụ, formatted partitions ndị ka ukwuu n'ime ndị na omume nile nke ndị nwe ha. Ma ha mgbe ụfọdụ na-formatted esighịkwa ụfọdụ oké software njehie.
Partitions mebiri emebi site Viruses: Viruses bụ mkpari; ha pụrụ ijere partitions n'ụzọ nkịtị na-abaghị uru na data unrecoverable nke pụrụ ịbụ ezigbo ihe ọgbaghara ma ọ bụrụ na data dị mkpa na ị emeghị ka a ndabere.
Agbake ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ site na kọmputa na diski ike nwere ike ịbụ oké hassle karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ aka na ahụmahụ nke nchọpụta nsogbu gị onwe gị na kọmputa. Wondershare Data Recovery Bụ a software niile ndị dị otú ahụ si n'ebe ndị, n'ihi na enweghị ahụmahụ ma ọ bụ oge ike imeli ịrụ a nkebi mgbake na ha onwe ha. Wondershare Data Recovery-Ahapụ onye ọrụ-na na na zuru ike mgbe ọ na-eme niile nlaghachie na mgbake usoro onwe ya. Wondershare Data Recovery Nwere ike ibudata site http://www.wondershare.com/data-recovery/. A otu afọ ikike nwere ike zụta maka a mere $29.95 mgbe a ndụ oge ikike ga-eri gị $39.95 naanị. Ọ bụ dakọtara na Windows Vista, 7, 8 na 8.1 tinyere Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 na awade ndakọrịta a dum nso nke ngwaọrụ dị ka laptọọpụ, desktop na ọbụna ese foto.
Download na wụnye Wondershare Data Recovery software na gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Ẹkedori Wondershare Data Iweghachite ozugbo echichi zuru ezu. Ị ga-akpaghị aka ga-zijere Ọkachamara mode nke ọbụna-ahapụ gị ịhọrọ ụdị data na ị chọrọ iji naghachi. Họrọ ụdị faịlụ na ị chọrọ iji naghachi dị ka gị mkpa. Ọ bụrụ na ọ dị, gị mkpa nile di iche iche nke data natara, nanị họrọ "All File iche" na kụrụ "Ekem".
Ọzọ, Wondershare Data Recovery ga-arịọ gị iji họrọ a Doppler ụdị dabeere na mmasị gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi na nso nso-ehichapụ faịlụ, họrọ "Kwado Deep iṅomi" ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị naghachi faịlụ na ị nwere ike furu efu n'elu N'ezie nke oge, na-aga maka "Kwado Raw Doppler" nhọrọ. Pịa "Malite" na-ekwe ka software na-amalite faịlụ nlaghachie usoro. Ozugbo software meworo ya ọrụ, ị ga-enwe ike ihuchalu Ewepụtara faịlụ. Ị nwere ike wee họrọ ndị na ị chọrọ iji weghachi site na-ahọpụta ha na ịpị "Weghachi" nhọrọ.
Otú e si edozi "nkebi okpu" nsogbu na Mac OS
Nke a njehie na-okosobode mgbe na-agbalị nkebi a mbanye si Mac OS X.
Ihe kpatara nsogbu bụ ọ bụ ezie na amaghị, a dị mfe fix dị. Iji tufuo nke "nkebi okpu" nsogbu na Mac OS, na-eso ndị dị mfe nzọụkwụ:
Reboot Mac n'ime Single User Mode site na-ejide Wụk + S n'oge buut
Na iwu ozugbo, ụdị: / sbin / fsck -fy
Mgbe fsck zuru ezu, ụdị "ụzọ ọpụpụ" ma ọ bụ "reboot" reboot
Buut Mac dị na mbụ, nyochaa disk ọzọ na Disk ịba uru, na nkebi dị na mbụ.
> Resource> Naghachi> Olee ịrụ nkebi mgbake iji weghachi faịlụ site na a na-ehichapụ / furu efu nkebi